BAAD , BIYO LA’AAN IYO DIIWAAN GELIN IS BARKAN. W/Q: Khadar Muxumed Muuse (koodh) | Hangool News
BAAD , BIYO LA’AAN IYO DIIWAAN GELIN IS BARKAN. W/Q: Khadar Muxumed Muuse (koodh)
March 27, 2016 - Written by Hangool
Iyo baaqa hirashada
Iyo baydhka xilashada
Ha ku xidhin intii baas
Bakhti-yahan xalaal neceb
Damac lagu balleysimay”
Abwaan Maxamed ibraahim warsame “Hadraawi”
waxa dhulka ku habsatay abaar. Kayntii iyo dooggii masoo dhawaan, rays iyo neecaw bari hore ayaa ugu dambaysay dhulka. Kayntu waa jaaqla. sanqadha xayawaankii dhexmushaaxi jiray wuu dhammaaday. inta ka noolina juuqa ayay gabeen oo aamus ayay wehel bideen.
Shimirihii baad iyo biyo la’aan ayay waa hore u tawafeen. Rahii jidhaamaha dhexdooda ka digriyi jiray bari hore ayay ka aguugtay, jiriqaagii dhirta dhexdeeda ka foodhyi jiray wuu harraaday, doobtii awrta ee dhawaaqa dhegaha u roon bixin jirtay masoo dhawaan, doofaarkii kaynta dhex mushaaxi jiray wuu dhammaaday, sakaaradii koox kooxda u wada socon jirtay hadalkeeda daa, bakaylihii wuu ruqday.
Waraabihii codka toolmoonaa wuu ka tanaasulay cidii, dhammaan xammaaratadii beerka ku socotay mid waliba god ayuu miciin biday intii noolayd, libaaxii wuu tahriibay oo meel biyo iyo baad leh ayuu doorbiday, daayeerkii dooxooyinka dhexdooda ayuu maydkiisii wadhan yahay, diinkii cawska qoyan cuni jiray samir ayuu door biday.
Halkee ayay ku dambeeyeen Meesiyadii iyo dadkii : dad kii iyo xooloihii way kala halaabeen, biyo iyo baad la’aan ayay u dhammaadeen, xoolihii intii noolayd naf kuma noola, intii dhimatayna hadalkeeda daa, adhigii wuuu dhammaaday, lo’dii way ruqatay, geelii wuu socod gaabiyay, dameerihii way rar gabeen, fardihii fadhibay doorbideen. Allaa xaal og.
Dadkii waxa soofood saaray harraad iyo biyo la’aan, dhammaan waddooyinka ay baabuurtu marto ayay tuban yihiin, si ay baad iyo biyo uga helaan, dadka qaarkii biyo la’aan ayay u dhinteen ha ugu darnaadaan caruurta yar yari. Allaa xaal og.
Maye dawladdii dadkan iyo xoolahan ka masuulka ahayd?
maxay ugu jawaabtay markii ay dadka abaaruru saameeyeen qaylo dhaam soo dirsadeen?
Ma uga jawaabtay baaqaa abaaraha intii taagteeda ahayd?
Jawaabtu waa maya.
Dawladdu xilkii ka saarnaa dadka iyo xoolaha midna kamay soo bixin, intii taagteeda iyo tamarteeda ahayd. Waxaanay ugu jawaabtay markii dadka abaaruhu hayaan qaylo dhaan soo dirsadeen in la is diiwaangeliyo.
Dawladdu waxay guud ahaan dalka kaga dhawaaqday diiwaan gelin, halkii ay kaga dhawaaqi lahayd gurmad deg deg ah oo ku saab san abaaraha. Dawladdu waxay bilawday olole doorasho, halkii ay ka gacan siin lahayd dadka tabaalaysan ee gaajaysan, una baahan taageerada ee ay iyadu masuulka ka tahay inta ilaahay ka sokaysa.
“markii dawladda hoose ee hargysa la doortay, ee maayirka laga dhigay c/raxmaan soltelco, ayaa markiiba wuxuu bilaabay olole ka dhan ah dadka danyarta ah, waxaanu ugu magac daray bilicda caasimadda, isla markiiba wuxuu shaqadii ka fadhiisiyay in ka badan laba boqol oo qof, oo ku shaqaysan jiray waddooyinka agteeda, kuwaasi oo ku haystay miisas yar yar iyo kaaryoonle yaal. Dadkii meherada yar yar lahaa ee aan loo qorshaynin meel ay u guuraan, ayaa waxay maayirkii su’aaleen? maayir horta bilicda iyo bariiska kee baa horreeya?
Sidaa soo kale horta madaxweyne diiwaaan gelinta iyo biyaha iyo baad la’aanta keebaa horreeya?
Taas waxa kasii daran gobolka awdal iyo gabilay waa laba gobol oo xadleh, midna diiwaan gelin iyo damaashaad ayaa ka socda, midna biyo la’aan ayaa loogu dhintay. Ku darsoo madaxdii qaranka ayaa jooga goobta ay diiwaan gelintu ka socoto, waxay wataan baabuur qaali ah oo boqol-boqol ku oo doolar ah.
Waxay isticmaalayaan boqolaal foosto oo shidaal ah, waxay bur burinayaan hantidii qaranka ee dadkaasi tabaalaysan wax loogu qaban laha, waxay ku damaashaadayaan cashuurtii laga qaaday dadkaasi tabaalaysan.
Ku darsoo madaxweynihii ummaddani soo dooratay , wuxuu ku maqan yahay dalxiis, waxaanu ku joogaa waddan ka kuwayd. kiiyoo dad kii soo doortay biyo la’aan iyo gaajo u dhimanaayo. Allaa xaaal og xisaabina aakhiray taallaa.
Ilaahay ha laga cabsado, oo qof waliba xilka uu ummaddan u hayo ha garto.
Guntii iyo gaba gabadii waxaan ku talin lahaa in guud ahaan ba la joojiyo diiwaan gelinta waddanka ka socota. waayo dastuurka qaranku wuxuu dhigayaa in doorashada la joojiyo haddii ay masiibo dabiici ahi timaaddo, sidaas awgeed abaartuna waa masiibo dabiici ah, hala joojiyo diiwaan gelinta.
Ilaahay abaarta ha inaga soo jabiyo, isaga ayay kaligii tahaye.
W/Q; Khadar Muxumed Muuse (koodh)
Hargeisa / Somaliland
Labada Kuuriya oo wadahadallo heer sare ah ka yeeshay Olimbigga
Mo Faarax oo ku guulaystay shaqsiga ugu wanaagsan ciyaaraha sannadka 2017
Kooxda Manchester City oo gaartay guushii 15-aad ee isxigta.
Ruushka oo laga mamnuucay ciyaaraha Olympika-da ee dhici doona sanadka soo socda
Argentina, Uruguay & Paraguay oo doonaya martigelinta Koobka Adduunka ee 2030